Thousands in Zimbabwe Bid Farewell to 'People's General' Tsvangirai - Foto Tempo.co
20 February 2018 09:08 WIB
Movement for Democtratic Change supporters pay their last respects to the party's leader Morgan Tsvangirai, in Harare, Monday, Feb, 19, 2018. Zimbabwes veteran opposition leader Morgan Tsvangirai died on Feb 14 aged 65, bringing an end to his long campaign to lead the country. Interim party President Nelson Chamisa said the party would win the elections scheduled for later this year as a tribute to the deceased leader. AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi
Mourners carry the coffin of Morgan Tsvangirai, leader of the opposition Movement For Democratic Change (MDC) at a memorial service in Harare, Zimbabwe February 18, 2018. Tsvangirai died on Feb. 14 aged 65 after a long battle with cancer and is due to be buried on Tuesday in his rural home of Buhera, 200 km (130 miles) southeast of Harare. REUTERS/Philimon Bulawayo
Mourners watch as the coffin passes at the funeral parade held for the late Movement For Democratic Change (MDC) leader Morgan Tsvangirai in Harare, Zimbabwe February 19, 2018. In a sea of red T-shirts, thousands of Zimbabweans bade farewell on Monday to opposition leader Morgan Tsvangirai, whose death has opened divisions in his Movement for Democratic Change (MDC) party only months before elections. REUTERS/Philimon Bulawayo
Mourners react at the funeral parade held for the late Movement For Democratic Change (MDC) leader Morgan Tsvangirai in Harare, Zimbabwe February 19, 2018. Party faithful converged on a square in downtown Harare to bid farewell to a man whose career was defined by his rivalry with long-time president Robert Mugabe, who was ousted in November. REUTERS/Philimon Bulawayo
Movement for Democtratic Change supporters pay their last respects to the party's leader Morgan Tsvangirai, in Harare, Monday, Feb, 19, 2018. In life, Tsvangirai and his supporters were beaten, humiliated and accused of treason. In death, the ruling ZANU-PF party has accorded Tsvangirai rare respect, including a military helicopter to transport his body to his rural home. AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi